Filefish - Ubomi base Lwandle - Mzantsi Afrika
i-Foolfish, i-Leatherjackets okanye i-Shingles
Ukufika kwi-110cm, i-20cm ephakathi.
Ingxenyana yangaphambili yomzimba inzulu kakhulu, ibanike ukubukeka kwintantathu. Umzimba ogxininiswe kamva. Okokuqala umgca wecala ude kakhulu. Umsila ogqityiweyo unqunyiwe (ubonakala ufutshane). Intloko ifakwe emlonyeni omncinci kunye namazinyo afana ne-incisor. Ungatshintsha umbala. Imifanekiso eyahlukileyo kunye neendlela zokubetha. Uhlobo lwabesilisa nabesifazana alufani.
Intsapho yeMonacanthidae iqulethe iigrafu eziyi-31 kunye neentlobo eziyi-95. Kufunyenwe kufuphi nemifula, kumatye okanye kwiindawo. Amajoni afihla kwisigxina. Ngokuqhelekileyo ifunyenwe ngababini. Isikhumba si-sandpaper, ngaloo ndlela siphakamisa igama layo. Spawn ngezantsi. Amaqanda agcinwa ngabazali bobabini.
Ukutya kuhluke kwi-specie ukuya kwi-specie, ukusuka kwi-algae kunye ne-seagrass ukuya kuma-invertebrates amancinci njengama-gorgoni kunye nama-hydrozoan. Ezinye iintlobo zezilwanyana zijolise kwii-corals kunye ne-zooplankton.
Blacksaddle mimic filefish (Paraluteres prionurus)
IHarlequin filefish (Oxymonacanthus longirostris)
Ifayile yefowuni (Cantherhines pardalis)